Dနေမင်း(နည်းပညာ): ✔Root Firewall PRO v2.1(for android)✔
✔Root Firewall PRO v2.1(for android)✔
ဖုန်းထဲမှာဒီဆော့ဝဲထည့်ထားရင်​အင်​တာနက်​လိုင်းအားမြှင့်​လာ​စေမယ့်​Root-Firewall-PRO v2.1 ဆိုတဲ့application​လေးတစ်​ခုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​-ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကိုအမြဲတစေယူသုံးနေတဲ့ Application တွေရှိနေတာကိုဖုန်းသုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးနီးပါးသိကြမှာပါ။ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်လို့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုတာက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ဖုန်းမှာ Original ပါဝင်ပြီး ကျွန်တော်တို့အတွက် လည်း အမှန်တကယ် အသုံးမ၀င်ပဲ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနေတဲ့ Application တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မစို့မပို့ ကွန်နက်ရှင်အတွက် တကယ်ကို အနှောက်အယှက်ပါပဲ။အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းထဲက Application တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲအင်တာနက် အသုံးပြုခိုင်းစေနိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။Application ရဲ့ နံမည်ကတော့ Root Firewall ဖြစ်ပါတယ်
...Free Version မှာတော့ Application အကန့်အသတ်နဲ့သာ သုံးခွင့်ရှိတဲ့အပြင် အချိန်အကန့်အသတ်လည်းရှိနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Root Firewall ကတော့ Pro Version ဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ချင်သလောက် Application တွေကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီ Application လေးကို Root ဖောက်ထားတဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ကဲ .. လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Apk ဖိုင်ကို ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်လိုက်ပါInstall လုပ်ပြီးလို့ Application ကို ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ပွင့်လာပါမယ်။ပွင့်လာတဲ့ထဲက အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ထားချင်တဲ့ Application တွေကို အမှန်ခြစ်တပ်ပေးပြီးအောက်ဆုံးက Apply Now ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် အဲဒီ Application ဟာ ဒီထိန်းချုပ်မှုကို မဖယ်ပေးမချင်း အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ခွင့် မရရှိတော့ပါဘူး။တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်တာနက်လိုင်းအားကို ပိုမိုအသုံးပြုခွင့် ရရှိလာပါမယ်​။-Apk file sizeက1.1MBရှိပြီးAndroid OS version2.1နှင့်​အထက်​ဖုန်းများမှာထည့်​သွင်းအသုံးပြုနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​-What's New- Fixed minor bugsAdditional informationUpdated11 August 2014Size1.1MInstalls1,000 - 5,000Current Version2.1Requires Android2.1 and upContent RatingEveryone♨Description♨This is the best choice to ad-blocking, prevent data over-billing, save battery life, as well as protect your privacyFeature:☆ Block Internet access for any apps: ☆ Separate 3G and WiFi data ☆ One-click widget enabled☆ Test blocked app inatouchRequirements☆ Rooted devicesMore details☆ Block Internet access for any apps: One can select to blockaselected application or applications, application running as root. Since it blocks Internet access per application ID (UID in regular Linux system), several applications may be assigned the same ID, you should block all of them or nothing.☆ Separate 3G and WiFi dataFor each application, you can select to block Internet access via either 3G or WiFi channel. It’ s extremely helpful if you don’t have an unlimited data plan. It saves you from over-billing because of background application accessing Internet such as Google+, Google Play or Amazon Music.☆ One-click widget enabledOne-click widget is the easiest way to toggle blocking status. It’s useful when you don’t want to use data connection and occasionally turn it on forawhile.☆ Test blocked app inatouchOnce you block an app, tap on it to see if the application can access to Internet or not.
Posted by Thu Rein at 5:05 AM